Nantsi indlela oyivelisa ngayo eminye imikhokeli ngeeMidiya zoLuntu | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 26, 2014 NgoMgqibelo, Matshi 5, 2016 Douglas Karr
Ndandihlangana nje nomnini-shishini kwaye ndichaza indlela emangazayo yokuba amajelo eendaba ezentlalo angaqhubeli ishishini kwinkampani yam kuphela, kodwa nakubathengi bethu. Kubonakala ngathi kukho ithemba eliqhubekayo njengoko limi kwimidiya yoluntu kwaye inefuthe kuyo isizukulwana esikhokelayo kwaye ndiyakholelwa ukuba ifuna ukulungiswa. Uninzi lwemicimbi nge imidiya yoluntu kunye nesizukulwane esikhokelayo awunanto yakwenza neziphumo zokwenyani, kodwa kufuneka wenze ikakhulu ngendlela izikhokelo ezichaphazeleka ngayo kumthombo ngamnye- kubandakanya imithombo yeendaba zentlalo. Iinkampani azilinganisi ngokuchanekileyo ukubuya kutyalo-mali lwamajelo asekuhlaleni (amaxesha ngamaxesha kungekho siphoso sabo).
Enye yeempazamo ezinkulu malunga neendawo zosasazo zasekuhlaleni kukuba abaqhubi iindwendwe ezisemgangathweni. Xa kuthelekiswa nentengiso ephumayo, imithombo yeendaba zentlalo ine-100% ephezulu yokukhokelela ekuvaleni. Uzivelisa njani izikhokelo ezivela kwiwebhu yentlalo? Ukuze ubonise amanyathelo ekufuneka uwathathile, uNeil Patel uthathe isigqibo yenza i-infographic eya kuyaphula yonke inkqubo.
UNeil ukhuthaza a imithombo yeendaba zentlalo zikhokelela kwisizukulwana Isicwangciso esivelisa isikhokelo esiveliswa kukusebenzisa ezi ndlela zilandelayo:
Sebenzisa amajelo eendaba ezentlalo amaninzi.
Ukuphuhlisa isicwangciso sexesha elide kwisitishi ngasinye seendaba zentlalo.
Ngaba ubalo lwabantu kunye negama eliphambili.
Yenza umxholo ohambelana nobungqina bakho.
Zibandakanye nabanye kwaye unxibelelane nabanye.
Umnqamlezo uphakamise amajelo akho phakathi kwabaxumi.
Landa iziphumo zakho.
Lungiselela umxholo wakho kwiinjini yokukhangela.
Ingcebiso yam yokugqibela kukubonelela ngothungelwano lwakho lwentlalo ngendlela eya kuguquko-ukubonelela ngezixhobo zobhaliso, ukubhaliswa kwe-imeyile kwizaziso zokutyhala, imiboniso, ukhuphelo kunye nezinye izinto zexabiso eziya kuthi zibandakanye inethiwekhi yemidiya yoluntu kwaye uziqhubele kutshintsho, ukuvuselela, okanye nokubakhulisa babe yindawo ekukhuthaza ukuba ungene kwinethiwekhi.
tags: umphakathiukudalwa komxholouphando lwabantuNxaxhebaubuchuleyophando ngegama elingundoqoisizukulwana esikhokelayoNeil patelindlela eya kuguqukoquicksproutenjini yokukhangela nouniziteshi zoluntuimithombo yeendaba zentlalo zikhokelela genimithombo yeendaba zentlalo zikhokelela kwisizukulwanaimithombo yeendaba zentlalo ikhokelaisicwangciso seendaba zoluntuukulandela umkhondo kwimidiya yoluntu
Kutheni uLawulo lweeAsethi zeDijithali liCandelo eliPhambili kwiTekhnoloji yeNtengiso yeNdalo
Agasti 30, 2014 kwi-8: 18 AM
I-infographics iyamangalisa ngokwenene. Umsebenzi omkhulu wenziwe.